Jona 2020, iray volan’ny #BLM ao Japàna · Global Voices teny Malagasy
Hetsipanoherana hanoherana ny herisetran'ny polisy ary manohana ny "Black Lives"
Voadika ny 29 Jona 2020 5:17 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, Français, Español, English
Fampitàna mivantana ny diabe “Black Lives Matter” (BLM) tao Tokyo, 14 Jona 2020. Pikantsary avy ao amin'ny fantsona Youtube “The Black Experience Japan”.
Ny volana Jona, nitranga tany aminà tanàna isankarazany manerana an'i Japàna ireo famoriambahoaka “Black Lives Matter”, tafiditra ho isan'ny fanehoana firaisankina erantany miaraka amin'ireo mpanao hetsipanoherana ao Etazonia sy any amin'ireo firenena hafa. Nanasongadina ny lanjan'ny ain'ireo mainty hoditra monina ao Japàna sy ny olana ateraky ny herisetran'ny polisy ao amin'ny firenena ihany koa izy ireny.
Toy ny tany Etazonia, ireo diabe “Black Lives Matter” natao tao Japàna dia nialohavana trangana herisetra nataon'ny polisy, izay voarakitra anaty lahatsary. Ny 30 May, andro maro taorian'ny nanombohan'ireo Amerikàna nanao hetsipanoherana ny famonoana nanjo an'i George Floyd, nipoitra ny lahatsary ahitàna ny polisy ao Shibuya, Tokyo, midaroka lehilahy Kiorda iray.
Ho ampahany amin'ny fanentanana anaty media sôsialy atao ao amin'ny Twitter sy ireo sehatra media sôsialy hafa, efa in'arivony maro no nifampizaràna ilay lahatsary, ary ny 30 May dia 200 ireo olona nanatrika ny hetsipanoherana nanoloana ny biraon'ny polisy ao an-toerana.
Na tsy mifandray mivantana aza,dia lasa teboka fiaingàna ho ana volana iray manerana ny firenena hanaovana fihetsiketsehana manohitra ny herisetran'ny pôlisy sy hampiakaram-peo ho fanohanana ny “Black Lives” ilay hetsipanoherana tao Shibuya. Isan'ireny ny diabe natao andro alina tao Tokyo tamin'ny 5 Jona; hetsipanoherana “Black Lives Matter” nokarakarain'ireo mpianatry ny lisea ao Nagoya, afovoan-tanànan'i Japàna; ary fihetsiketsehana iray be mpanjohy tao Kyoto.
Raha nitohy nitombo ny tosika, nisy diabe iray tao Osaka ny 7 Jona, nahasarika olona avo folo heny noho izay noeritreretina:
Nandeha nanatrika ny hetsipanoherana #BlackLivesMattter tao Osaka androany ny raiko, izay efa 72 taona. Nanodidina ny 1.000 ireo olona nifamory tao. Tena mirehareha aho manana azy ✊🏼#blmkansaimarch #BLMKansai#BlackLivesMatterKansai#AsiansForBlackLives pic.twitter.com/9p2pjQ6ieO
— Yuko Weiner (@yukoweiner) 7 Jona 2020
Nahasarika olona 3.500 ny diabe iray faharoa “Black Lives Matter” natao tao Tokyo ny 14 Jona, nampisongadina ny tanjaky ny fikarakaràn'ny Black Lives Matter Tokyo ary tambajotra iray iarahan'ireo fikambanana eny ifotony mitovitovy aminy manerana an'i Japàna :
Fandraisana anjara nampitolagaga tamin'ny #BLMTokyoMarch #blm東京行進 Faran'izay tony, rivo-piainana mahafinaritra. Tena nahafinaritra ny nahita ireo mpanao hetsipanoherana tsy tia kabarim-pankahalàna nankahery anay tao amin'ny sampanan'i Shibuya pic.twitter.com/95Fp6Mr568
— Pheebz (@PheebzEatz) 14 Jona 2020
Olana iray ny fanavakavahana tsy tia Mainty Hoditra
Raha toa ka efa hatry ny ela i Japàna no efa toerana niantranoan‘ireo Mainty Hoditra marobe, tsy zava-baovao ny fanavakavahana tsy tia Mainty Hoditra. Mbola zavatra mahazatra ny maro ny mahita fampiasàna ny endrika mainty any anatin'ny media sy ny dokambarotra Japoney ka tany amin'ny fiandohan'ny Jona, nisy fantsom-pahitalavitra goavana iray nanasa an'i Jared Taylor, ilay Amerikàna fantadaza mpiaro ny fahambonian'ny fotsy mba hanome “sahan-kevitra” (context) momba ny hetsika “Black Lives Matter”.
Ohatra iray amin'ny fanavakavahana tsy tia mainty mifaka lalina ao aminy nasehon'ny media Japoney ny “mpanazava” ny hetsika “Black Lives Mattter” nalefan'ny fahitalavi-panjakana NHK tamin'ity Jona ity. Taorian'io ny NHK dia voatery nanao fialantsiny noho ilay sarimiaina, izay mandoko ireo Amerikàna Mainty Hoditra ho toy ny mpandroba mahery setra:
Ity fandaharana amin'ny TV ity dia mikendry ny hanabe ireo mpijery sy hanome zavabaovao momba ireo andiana olana, ary azo lazaina ho mba seho tsara ihany. Mifanaraka tsara sy tsy mitanila ny ankamaroan'ireo zavatra atolotra, saingy tsy OK ity lahatsary ity. #アメリカ #抗議デモ #世界のいま #アニメ #BlackLivesMatter 🇯🇵 pic.twitter.com/4WpflexivO
— Melanie Brock (@melaniebrockjpn) 7 Jona 2020
Araka ny fanamafisana ao anaty bitsika iray nifampizaràna be nalefan'i Krissy, mpamorona lalao, dia herin'ny fandisoambavovao sy ny fitarihana olona no tena zavadoza amin'ny fanaovana tatitra sy fandrakofana fanavakavahana tahaka itony:
Mampahatahotra ny asako aty Japàna, mety hanomboka hamaky tranombarotra na handroba aho satria Amerikàna Mainty Hoditra. 😂 Misaotra ry NHK
— Krissy (@kawaiigamer_19) 9 Jona 2020
Iharan'ny fanararaotana ihany koa ireo olomalaza Japoney safiotra sy manana kolontsaina mifangaro. Ariana Miyamoto, izay voafidy ho Oliravin'ny Tontolo tao Japàna tamin'ny 2015, dia niaritra fanakianana ho “tsy tena Japoney feno tsara“.
Ilay kintan'ny Tennis, Naomi Osaka, izay sady Mainty no Japoney, dia efa hatry ny ela no nampiaka-peo momba ny fanavakavahana ao Japàna, ary tsy ela akory izay, dia niteny fa “tsy ao an-tsainy mihitsy ny hiala vehana ka tsy hanohana ny Black Lives Matter”.
Mandritra izany fotoana izany, Jay Jackson, Amerikàna Mainty Hoditra mpanipy baolina ao anatin'ny ekipa japoney matianina mpilalao Baseball, dia nihevitra fa ny fomba tsotra indrindra hanomezana vàhana ny fahatakarana dia ny fifampiresahana:
Ahoana ny hevitrareo raha asaina miantso ireo olona mainty hoditra avy ao Amerika ry zareo mba ho izy ireny ihany no hitondra fanazavàna ho an-dry zareo….??? Mbola misy vitsivitsy ihany ireo monina na miasa eto Japàna amin'izao fotoana izao.
— Jay Jackson (@Jaxland58) 8 Jona 2020
Raha na nanazava tao anaty lahatsoratra andrana iray ho an'ny gazetiboky Toyo Keizai momba ny lanjan'ny hetsika “Black Lives Matter” sy ny olan'ny herisetra ataon'ny polisy amin'izao fotoana izao, sosokevitra no nomen'i Baye McNeil, ilay mpandinika sy mpamelabelatra, mpikatroka sady efa nipetraka fotoana ela tao Japàna :
Fa maninona ireo media japoney no tsy manao ezaka mba mitady mpandalina tena mahay tsara ny resaka [fanavakavahana tsy tia mainty] ary afaka mampahafantatra ny olona amin'ny fomba tsotra?
Na izany aza, tsy ny media japoney rehetra no nanao hadisoana : Toku, Da Ne, resadresaka malaza ho an'ireo efa misotro ronono, mandeha isamaraina mandritry ny herinandro ao amin'ny fahitalavitra, dia nahazo dera noho ireo tsirin'ezaka ataony ho fanazavana ny olan'ny “Black Lives Matter”, ary ireo marika toy ny Sanrio, ilay mpamorona ny Hello Kitty ary ireo endrika sasany mahafatifaty sy mendrika hatao haingo dia naneho ny fanohanany ny “Black Lives”:
Eo foana hifanohana ny namana. Ireto misy torohevitra vitsivitsy mba ho namana sy mpiara-dàlana tsara kokoa 💕 pic.twitter.com/WtXoq33db7
Vao manomboka indrindra izao ny hetsika “Black Lives Matter” ao Japàna; miaraka amin'ireo fihetsiketsehana voalahatra hitohy mandritra ny lohataona, isan'izany ny diabe iray amin'ny 5 Jolay ao Nagoya.